Am4 အရည်အေး China Manufacturers & Suppliers & Factory
Am4 အရည်အေး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 12 များအတွက်စုစုပေါင်း Am4 အရည်အေး ထုတ်ကုန်များ)
ထုပ်ပိုး: ၂၀ ကီလိုဂရမ် / စည်၊ ၂၅ ကီလိုဂရမ် / စည်၊ ၅ ကီလိုဂရမ် / စည်သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်
min ။ အမိန့်: 100 Kilogram
ဖန်ခွက်အတွက်ဆေးထိုးခြင်းအတွက်ဖလိုရိုက်အအေးရည် တရုတ်အမည်: octafluoroisobutyl အီ CAS အဘယ်သူမျှမ။ : 163702-06-5 ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်: CL7200 alias ကို: Ethyl nonafluoroisobutyl အီ EINECS မရှိပါ။ မရှိပါ မော်လီကျူးပုံသေနည်း: c6h5f9o မော်လီကျူးအလေးချိန်: 264.09g / mol ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဝိသေသလက္ခဏာများ Appearance and...
Electric insulator တွင်လည်းအရည်အေး
Electric insulator တွင်လည်းအရည်အေး အလတ်စားအေး Fluorocarbon ကြောင့် 55KV ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ, နှင့်မြင့်မားသောပြိုကွဲဗို့အားရှိပါတယ်။ ဒီစီးရီးမြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်သောထူးခြားတဲ့ Perfluorinated အရည်, 1.62g / ml သိပ်သည်းဆများမှာ က The...
Refrrigerent အရည်အေးရေ အလတ်စားအေး Fluorocarbon ကြောင့် 55KV ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ, နှင့်မြင့်မားသောပြိုကွဲဗို့အားရှိပါတယ်။ ဒီစီးရီးမြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်သောထူးခြားတဲ့ Perfluorinated အရည်, 1.62g / ml သိပ်သည်းဆများမှာ က The...
အရည်အေး CPU အအေးခံခြင်း
အရည်အေး CPU အအေးခံခြင်း ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia...
နယူးစွမ်းအင်ဘက်ထရီကားများအတွက်အရည်အေး ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia...
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောအရည်အေးရေခဲသေတ္တာ
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောအရည်အေးရေခဲသေတ္တာ ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ...
CPU ကိုဖုန်းများအတွက်အရည်အေး ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia...
ကားများအတွက်အရည်အေး ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia...
နစ်မြုပ်အရည်အေးဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia...
စမတ်ဖုန်းများတွင်အရည်အေးအလုပ်လုပ် ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia...
တစ်ဦးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များတွင်အရည်အေးရေခဲသေတ္တာ ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia...
အရည်အေး Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာထိန်းသိမ်းခြင်း
အရည်လေတပ် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာထကျ သာ. ကောငျးအေး ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia...
Am4 အရည်အေး အရည်အေး 3m အရည်အအေး Nzxt အရည်အေး Asus အရည်အအေး Kraken အရည်အေး အရည်အေး Xspc အရည် Vape အေး